Qodobbada Kala-diridda waxaa loo Isticmaalaa Kala-diridda Shirkad
Shirkad ama LLC waa inay fayl garaacaan shahaadooyinka ama qodobada kala diridda ee gobolka si loo joojiyo jiritaanka shirkadda. Shirkadaha Incorporated waxay kaa caawin doonaan xaraynta waraaqahaas oo ka mid ah gobolada 50 iyo meelaha shisheeyaha qaarkood.
Iibso Shirkaddaada / Shirkaddaada
Xaaladaha qaarkood jiritaanka shirkadaada waxaa isticmaali kara shaqsiyaad raadinaya inay ku daraan shirkad da 'ah. Shirkadaha Incorporated waxay ka iibsan karaan shirkadaada adoo ku qoraya buugga shirkadaheena da'da ah. Nala soo xiriir maanta si aad u ogaato inaad uqalanto in meheraddaada la iibsado.